Miresaka amiko amin'ny TokBox | Martech Zone
Alatsinainy, May 17, 2010 Talata, Oktobra 4, 2011 Lorraine Ball
Geek marketing aho, ka faly aho rehefa tonga ny haitao vaovao izay afaka manampy ny mpanjifako. Mandany ora maro amin'ny fisoratana anarana sy amin'ny fanandramana serivisy vaovao aho. Heveriko fa TokBox mety ho fitaovana tiako indrindra.
Nampahafantarin'ny mpisolovava ahy tamin'io serivisy io. ( Eny Manana aho mpisolovava iray, ary tsara kokoa noho izany, mpisolovava manam-pahaizana momba ny haitao izy). Nandefa fifanarahana ho azy aho handinihany, ary tsy nandefa antontan-taratasy lava 2 - 3 aho, izay tsy hovakiako akory fa nandefa ahy ity horonantsary ity. Rehefa niresaka tamin'i Matt izy dia nanaiky fa tsy hampiasa an'io fitaovana io amin'ny mpanjifa rehetra izy. Ny mpanjifa sasany dia aleony, na mitaky antontan-taratasy an-tsoratra, fa ho an'ireo izay tsy izany dia fomba fifandraisana haingana sy mahomby.
Raha ny fomba fijerin'ny serivisy dia haingana kokoa ny fandraketana ny horonantsary, avy eo manorata na miandry sekretera iray hametraka valiny mba hahazoako ny valinteniko amin'ny endrika tiako, ary afaka nifindra tany amin'ny mpanjifany manaraka i Matt.
TokBox dia manana fiasa maromaro izay tena tiako:
Maimaimpoana - Eny, misy ny fanavaozana sy ny fivoarana avo lenta azo vidiana, saingy ny fonosana ifotony dia feno tanteraka
Azoko atao ny mamaly amin'ny alàlan'ny horonan-tsary, feo, mailaka na antso an-tariby avokoa
Ny fiasa amin'ny feo sy horonan-tsary dia misy amin'ny vidiny mirary: $ 9.99 / volana ho an'ny fifampiresahana kely. $ 18.99 ho an'ny chat misy olona mihoatra ny 200. Ity dia safidy mahomby amin'ny webinar
Fa maninona aho no faly be amin'izany?
Izaho dia mpandaha-teny fa tsy mpanoratra, noho izany dia tena manintona ahy ity ho toy ny fomba fifandraisana amin'ireo prospect sy mpanjifa.
Manantena aho ny hampiditra ny horonantsary ho ampahany amin'ny fampielezan-kevitra mitete izay misy, izay hifandimby, video, feo ary mailaka nentin-drazana
Ny interface interface dia tsotra be na ho an'ny mpanao dokambarotra na ho an'ny mpanjifany. Nahazo mailaka tsotra aho, tsindrio ny rohy sy ny programa natomboka. Tsy mila fahaizana manokana izany ary ho an'ny mpanjifako maromaro, tsy misy fahaizana dia manakiana.
Inona no azonao atao amin'ny TokBox? Mieritreritra aho fa miankina amin'ny eritreritrao ny valiny. Raha mampiasa azy ianao dia tiako ny mahita santionany amin'izay ataonao!
Tags: linktigerfikarohana mifanohitra amin'ny sosialyWriting
Tsy ny mpitsikera no manisa